के फोटो खिच्ने सर्प नि हुन्छ त? :: विशाल न्यौपाने :: Setopati
तस्बिरः चिचिन्डे सर्प/अभिषेक सापकोटा
संसारभरि नै फोटो खिच्ने ट्रेन्ड चलिरहेको छ। बिहान उठ्ने बित्तिकै चियाको चुस्कीदेखि लिएर रातिको हुस्कीसम्मको फोटो खिच्नु पर्छ हामीलाई। घरमा पकाएको गाभादेखि लिएर बन्जी हान्दा हावामा कावा खाएको फोटो पनि चाहिन्छ हामीलाई। किनकि ट्रेन्ड इज ट्रेन्ड।
यो ट्रेन्ड हाम्रो अहिलेको पुस्तामा मात्रै नभएर हाम्रा 'बा' हरुको पालामा पनि थियो। बच्चा जन्मेपछी पैसा तिरेर अति नै दुर्लभ क्यामराको खोजी हुन्थ्यो र जन्मेको नयाँ शिशुलाई थोत्रो कपडाले सिलाएर बनाएको थाङ्नामा भोटो लगाइदिएर फोटो खिच्ने गरिन्थ्यो। किनकि ट्रेन्ड इज ट्रेन्ड।
यो जुन ट्रेन्ड छ नि, त्यो झन् ट्रेन्डिङमा छ नेपालमा र यो ट्रेन्डलाई म सर्पसँग जोड्न चाहान्छु। हामी अलि अनौठो छौँ, अरुले गर्न नसक्ने अलि अप्ठ्यारो काम देख्नेगरी अरुलाई देखाउन निकै गौरवशाली ठान्छौँ।
हो, कुरा हरेक ठाउँमा लाग्ने मेलाको हो। जहाँ मानिसहरुको निकै चहलपहल, व्यापारको धमाधम र विभिन्न खेला हुन्छ। तपाईंहरुले पनि आफ्नो मगजमा ख्याल राख्नु भएको होला हरेक जस्तो मेलाहरुमा सपेराहरु एउटा पोको भित्रै ४-५ वटा बाँसको चोयाले बुनेको टोकरीमा सर्प बोकेर आएका हुन्छन्।
त्यो टोकरीमा प्रमुख सर्प भनेको कोब्रा र दुई मुखे सर्प हुन्छ। यी सर्प देखाएर सपेराहरुले ठूलो भीड भेला पर्छन्। मलाई अचम्म त त्यति बेला लाग्छ जब यी सर्पहरु हेर्न, पूजा गर्न गएको मन्दिरमा भन्दा सपेरा भएको ठाँउमा बढी भीड र ठेलामठेल हुन्छ।
त्यसपछि सपेराले आफ्नो डमरु निकालेर डम...डम... गर्दै बजाउँछ र सर्पलाई नाच्न लगाएको देखाउँछ। यो देखेर मानिसहरु खुसी भइ ताली र पैसा नै पैसा सर्पमाथि वर्षाउछन् र यो फेरि देखेर सपेरा मख्ख र मानिसहरु तीनछक्क पर्छन्।
यो कुरा यतिमा मात्रै सीमित हुँदैन। अझ मानिसहरुलाई देखाउनु पर्छ। म जस्तो निडर, सहासी, तीन लोक चौध भुवनमा नभएको बाहुबलि फोटो खिचुवा भनेर। हो यसरी 'फोटो खिच्ने सर्प' को प्रयोग हुन्छ मेलामा, नाग पञ्चमीमा।
अझै तपाईंहरुले अर्को कुरा पनि हेक्का राख्नु भएको होला सर्पले फोटो खिच्ने कुरो। तपाईंहरुले सुन्नु र देख्नु भएको होला, सर्पले फोटो खिच्छ भनेर तपाईंको छरछिमेक वा करेसाबारीमा आएको सर्प मारेको। कि कसो?
फोटो खिच्ने सर्पलाई मारेन भने फेरि भरे राति वा पछि बदला लिन्छ भनेर मानिसहरुले कुरा गरेको पनि सुन्नु भएको होला नि, हैन? हो, यस्ता तथ्य नभएको कुरा सुनेर तपाईंले कत्ति अबोध सर्पको इहिलिला पनि समाप्त गर्नुभयो होला र आँखा नै फुट्ने गरी क्रूरताको साथ हात अगाडि लम्काउनु भयो होला। के साँच्चिकै 'फोटो खिच्ने सर्प' हुन्छ त?
अहँ! हुन्न। किनभने सर्प फोटो नै खिच्न जान्दैन। यदि उनीहरुलाई फोटो खिच्ने आउने भएको भए तपाईंको विवाह, व्रर्तबन्ध, पास्नी, जन्मदिनमा आएर फोटो खिचेर पैसा असुल गरी हाल्थे त।
ल, छातीमा हात राखेर भन्नुहोस् त- के कुनै सर्प तपाईंको विवाह, वर्तबन्ध, पास्नी, जन्मदिनमा आए त? पक्कै पनि आएनन्। वैज्ञानिक तथ्यको कुरा गर्दा सर्पहरुको दिमाग हामी जस्तो विकसित भएको हुन्न जसकारण उनीहरुको स्मरण क्षमता त हुन्छ तर मानिसहरु जस्तो बदला भावना (इमोसनल रेस्पोन्स) भने हुँदैन।
उनीहरुको आँखामा पटल वा परेली नभएको कारण सधैँ त्यो खुल्ला हुन्छ र सर्पको नजिक जाँदा प्रकाशको कारण तपाईंले सर्पलाई नियाल्दा उस्को आँखामा तपाईंको आकृति बन्नु सामान्य कुरा हो।
अझै भन्नुपर्दा, यो कुराहरु हामीले बलिउड र कलिउड सर्प सम्बन्धी चलचित्रबाट प्रभावित भएर भएको पनि हो। यसकारण 'फोटो खिच्ने सर्प' हुँदैन।
फोटो खिच्ने भनेको मानिसहरुले हो र 'ट्रेन्ड' को चिन्ता हामी मानिसलाई मात्र हुन्छ। त्यसैले सर्प बचाऔँ, पर्यावरण जोगाऔँ। यो कुराको हेक्का रख्दै ती सपेराहरुलाई पुनः स्थापना गरेर केही तलब दिइ सर्प संरक्षणमा प्रयोग गरौँ।
यसरी सबैको भलो हुन्छ र समाजमा कुप्रथा र अन्धविश्वासको पनि निर्मूल हुन्छ। धन्यवाद!
प्रकाशित मिति: बिहीबार, माघ ८, २०७७, ०५:००:००